#Wararkii iyo Dhacdooyinkii ugu waaweyna Sanadkii 2017 ee Soomaaliya ka dhacay | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Wararkii iyo Dhacdooyinkii ugu waaweyna Sanadkii 2017 ee Soomaaliya ka dhacay
Waa Warbixin gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay guud ahaan Soomaaliya Sanadkii aynu soo dhaafney ee 2017-ka.
1/1/2017 Barllamanka Cusub ee Federaalka Soomaaliya oo magacaabey guddi doorasho oo ka kooban 15 xubnood iyagoo laaley guddi doorasho oo horey u jirey kasoo rabey iney maamulaan doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacdey bilowgii sanadkaan.
2/1/2017 Guddiga doorashada Guddoonka aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka Soomaaliya oo gooyey waqtiga ay dhaceyso doorashada Gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku xigeenadiisa.
5/1/2017 Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si rasmiya xariga uga jarey xarunta cusub ee KMG ee aqalka sare Dowlada Federaalka taasoo aheyd dhisme dowada Tirkiga dayactir ku sameysay halka dhinaca kale uu furey Kalfadhiga Kowaad ee aqalkaas.
10/1/2017 Barlamanka maamulka Galmudug oo xilka ka qaadey Madaxweyne Cabdikarim Xuseen Guuleed kadib markii ay ku eedeeyeen xil gudasho la’aan. Guuleed ayaa waxay aad isugu dhowaayeen Madaxweynihii hore ee Dowlada Federaalka Soomaaliya. Xil ka qaadistaan ayaa dhabar jab siyaasadeed ku aheyd Xasan Shiikh oo markaas Musharax ahaa.
11/01/2017 Aqalka hoose Barlamanka Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale gudoomiye u doortey Maxamad Cismaan Jawaari kadib markii uu loolan adag dhexmarey Cabdirashid Maxamad Xidig.